မီးအားလုံး! "2017 ခုနှစ်, Forge ရဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ထိပ်တန်းတစ်ဆယ်ဖြစ်ရပ်များ" လောလောလတ်လတ်ထွက်ကြွလာ - တရုတ် Qingdao Hongda သတ္တုဖွဲ့စည်းခြင်း
ပွတ်တိုက်အားဝက်အူစာနယ်ဇင်းဟော့ Forge ရဲ့
hot Forge ရဲ့စာနယ်ဇင်း
မီးအားလုံး! "2017 ခုနှစ်, Forge ရဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ထိပ်တန်းတစ်ဆယ်ဖြစ်ရပ်များ" လောလောလတ်လတ်ထွက်ကြွလာ
တောင်းခံခြင်း၏တစ်လထက်ပိုပြီးပြီးနောက်မဲပေးနှင့်ရေတွက်သည် "2017 IN THE Forge ရဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် Top Ten အဖွစျအပကျြ" နောက်ဆုံးတော့ထွက်လာမယ့်ခဲ့သည်! အထဲကကုမ္ပဏီထက်ပို 10000 စာဖတ်သူများနှင့်အင်တာနက်သုံးသူတွေရဲ့အားဖြင့်အကြံပြုခဲ့သည့် "အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှုများအတွက်အောက်တိုဘာလ, Qingdao hongda ကုမ္ပဏီ EP-4000 လျှပ်စစ်ဝက်အူစာနယ်ဇင်း" နှင့်အတူထိပ်တန်းသုံးအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
အောက်တိုဘာလ 13, 2017 ရက်နေ့တွင် 2016 ခုနှစ် Qingdao Hongda ကုမ္ပဏီကတီထွင် EP-4000 လျှပ်စစ်ဝက်အူစာနယ်ဇင်း, တင်ပို့ရောင်းချမှုပြီးစီးခဲ့ထုတ်ကုန်၏ဤအမျိုးအစားအစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှုများအတွက် Hongda ကုမ္ပဏီပြည်တွင်းစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်တစ်ဦးတည်းသာဖြစ်လာမှတ်သား။ ဒီတော့ဝေး, EP-4000 လျှပ်စစ်ဝက်အူစာနယ်ဇင်းများ၏ပြည်တွင်းစျေးကွက်ဝေစု 80% အဘို့မှတ်ခဲ့သည်။ သဘောပေါက်စွမ်းအင်ချွေတာရေးနှင့်အစိမ်းရောင် Forge ရဲ့။
Qingdao Hongda သတ္တု Machinery Co. , ဖွဲ့စည်းခြင်း၏ဥက္ကဋ္ဌ၏ထူးချွန်အလှူငွေ, Ltd မှအဆိုပါ Forge ရဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းများကအသိအမှတ်ပြုခဲ့ပြီး 2017 အတွက် Forge ရဲ့စက်မှုလုပ်ငန်း၏ထူးချွန်သူတစ်ဦးအဖြစ်ဆုချီးမြှင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အချိန် post: နိုင်ပါစေ-18-2018
မီးအားလုံး! "2017, အမှခုနှစ်တွင် ...
2017 တရုတ်နိုင်ငံအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသတ္တုဟောင်းဖွဲ့စည်း ...
အဆိုပါ 22 အင်တာနေရှင်နယ် Forge ရဲ့ကွန်ဂရက် 2017
EP-1000 လျှပ်စစ်ဝက်အူစာနယ်ဇင်းစိုက်ထူခြင်းနှင့် ...